အဆိုပါ telethon မှာ Shannen ဒိုဟာဆီ, Celine Dion နဲ့အခြားကြယ်များကိုကင်ဆာအထိရပ်
Los Angeles မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တစ်ဦးမေတ္တာဖြစ်ရပ်ကင်ဆာ, ကင်ဆာ၏လေ့လာမှုမှညွှန်ကြားသည့်အနေဖြင့်ပိုက်ဆံကောက်ယူဖို့ Up ကိုရပ်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒီအပြင်, အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကိုသိပ္ပံနည်းကျဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကဤကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လုပ်ဆောင်နေကူညီပေးသည်။
တစ်အနုပညာရှင်အခြားသူများကိုကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်ပရဟိတအတွက်စေ့စပ်တဲ့အခါမှာအခုတော့ဒါဟာကောင်းသောပုံစံစဉ်းစားသည်။ ညဦးယံအချိန်ဒီနှစ်အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးဖျော်ဖြေပွဲခန်းမထဲမှာကင်ဆာအထိရပ်, သို့သော်, အတိတ်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ကကြယ်ပွင့်ဧည့်သည်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပါပဲ။ သို့သော်ဤကူညီဖို့ရန်အလိုဆန္ဒ, ဒါပေမယ့်လည်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သည်မိမိအသက်တာ၌ပစ္စုပ္ပန်သူတို့အားများစွာသောကင်ဆာ၏အရှုံးနှငျ့ရငျဆိုငျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းက, အခြားသူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းဝေမျှဖို့လိုလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအဖြစ်အပျက်မှာဧည့်သည်များအကြားမင်းသမီး Shannen ဒိုဟာဆီယခုတက်ကြွစွာရင်သားကင်ဆာဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသူ, သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူရှိ၏။ စကားမစပ်မကြာသေးမီကအနီးကပ် Shannen ကုသမှုကောင်းစွာသွားနှင့်ဆရာဝန်များကအနာဂတျအတှကျအကောင်းတစ်ဦးခန့်မှန်းပေးသောသို့ပြောသည်။ သူမ၏ဓာတ်ပုံဆရာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေလည်းအဖြစ်အပျက်၏စည်းရုံးရေးမှူးသူသည် Bradley Cooper, Rita Wilson က, Emma Stone, Tom Hanks, Mayim Bialik, Matt Bomer နှင့်အခြားသောမတိုင်မီ စုပေါင်း. အပြင်၌။ အားလုံးဧည့်သည်များကင်ဆာအထိရပ်အဆိုပါလိုဂိုနှင့်အတူကို T-ရှပ်အင်္ကျီခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဝေါ့ဒစ္စနေးဖျော်ဖြေပွဲခန်းမညနေတွင်ပုံမှန်အတိုင်း format ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ နာမည်ကြီးတွေဖုန်းဖြေကြားခြင်းနှင့်ကင်ဆာမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ပုံပြင်များကိုပြောသည်။ သူမသာမိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုပြောသောသူအပေါင်းတို့အဆိုတော် Celine Dion တို့တွင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ထိထိမိမိသီချင်းသီဆိုခဲ့။
Celine Dion အားဖြင့်မိန့်ခွန်း
နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဒီနှစ်, အကျိတ်နှင့်အတူကြာမြင့်စွာစစ်တိုက်ပြီးနောက်ကွယ်လွန်သွားသူကိုသူမခင်ပွန်း Rene, ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအဆိုတော်ဒါလပေါင်းများစွာများအတွက်အများပိုင်၌ထငျရှားမရှိသေးပေရာ, ဒီအဖြစ်အပျက်မှာဝမျးနညျးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းကိုထောကျပံ့ဖို့ကြိုးစား, နှင့်အဆိုတော်ပန်းရောင် Celine များအတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်စာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။ ဒီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ Dion စွမ်းဆောင်ရည်မတိုင်မီထိုကဲ့သို့သောစကားများဟူမူကား, စင်မြင့်ကို ယူ. ,
"ကင်ဆာငါ့ခမည်းတော်နှင့်အစ်ကိုကိုယူ။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်အလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်မခင်ပွန်းရောဂါကနေသေဆုံးခဲ့ကြသည်။ ငါတကယ်သူ့ကိုလက်လွတ်။ Renee, ငါသည်သူသည်အစဉ်အမြဲငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်သဘောပေါက်ဖို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသတိရပါ။ နှင့်2လအတွင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်အကြီးအဆိုတော်ပန်းရောင်ငါ့ကိုသာယာသောအံ့အားသင့်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုကင်ဆာနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့အရာအတွက်အလွန်များစွာသောစကားအဖြစ်လိုအပ်သော Recovery ကိုတစ်ဦးသီချင်းကိုပေး၏။ ငါမပြည့်စုံတာကြောင့်ဖွင့်, သငျသငျကိုယျတိုငျနားထောငျပါလိမ့်မယ်။ "
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Celine Dion ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်ခဲယဉ်းကြိမ်ရှင်သန်ထောက်ခံတဲ့သူ Bradley Cooper, ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီတွင်သူမ Instagram ကိုအပေါ်သူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် wrote:
"Cooper ကအလွန်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ရုံငါကင်ဆာအထိရပ်မြေတပြင်လုံးအသင်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဤလူမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ကမ္ဘာကြီးကြောင့်ကင်ဆာ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်ခက်ခဲသိကြပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်ငါ့နှလုံးဖွဲ့သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ထိထိမိမိပုံပြင်များအများကြီးပိုမြန်ရိုက်နှက်ကြား၏။ ဒါဟာအကြီးအဖြစ်အပျက်ပဲ! "။
အဆိုပါ Pussycat ရုပ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါပြီနှင့်အဖွဲ့ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ကြ
အီဗာ Longoria ရုပ်မြင်သံကြားဒရာမာအတွက် retro ပုံရိပ်ကိုကြိုးစားခဲ့ "ငြင်းဆိုရန်နှင့် Fall" ဖြစ်ပါတယ်
ဖရန့် Vogue Italia အကြီးအကဲအတွက်ကာလရှည်အယ်ဒီတာ, Sotsanni သေဆုံးခဲ့
Shannen ဒိုဟာဆီ regrown ဆံပင်ကောက်ကောက်ပြသ
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ရွေးချယ်မှုဆု 2017 မှာမှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်အရောင်နှင့်အခြားကြယ်များနှင့်အတူပဲရစ်ဂျက်ဆင်
Christina Mendez အဝလွန်မိန်းမတို့အဘို့အင်တာနက်ကိုစတိုင်အတန်းအပေါ်သုံးစွဲ
79 နှစ်အရွယ်ဂျိန်း Fonda "သူဟာ Emmy" သူတို့လမ်းပရိသတ်တွေအထင်ကြီး
မင်းသမီး Emma Watson ဟာနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းအစ်မတွေနဲ့တူကြည့်ဖို့စတင်
လီယိုနာဒို Nina Agdal နောက်ကွယ်မှတော်တော်မိန်းကလေးနှင့်အတူညစာရှိပါတယ်
ရွှေ "Seagull" လက်ပတ်နာရီ
Will Smith ရဲ့သမီးသတ်သေကျူးလွန်ရန်ကြိုးစားခဲ့
Multivarka အတွက်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ Pie
မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအတှကျအ UNO ဇွန်း